Fiber Optic Cable Vagadziri & vanotengesa - China Fiber Optic Cable Fekitori
Fiber optic cable, inonziwo fiber fiber tambo ndiyo gungano rinoshandiswa kutamisa ruzivo kuburikidza nemhepo yechiedza. Fibre optic tambo inovakwa kubva kune imwe kana kupfuura fiber optic fibers, yakasimbiswa uye inochengetedzwa neakasarudzika zvinhu kuti ive neakanaka masimba epanyama panguva yekufona telecommunication mutsara.
Optical fiber tekinoroji inobvumidza mwenje kuti ufambe pamwe neakaonda magirazi machubhu. Girazi machubhu ane akakosha dhayamita, kazhinji 9/125 yeimwe chete mode kubatana. Fibers inogadzirwa neakasiyana matekinoroji vimbiso yakaratidza kukotama nharaunda yehubhu yematanho G652D, G657 A1, G657 A2. Fiber cores dzinoiswa inki nemavara akasiyana, izvo zvinoita kuti kubatana kwacho kuve nyore panguva yematepi cores.
Jera ine dzakasiyana mhando tambo dzinoenderana nenzvimbo yekushandisa, senge:
1) Main mutsetse internet optic waya
2) FTTH inodonha fiber optic tambo
3) Imba yekuparadzira fiber optic tambo
4) mutsinga dzinofamba nemukaka internet optic waya
Mhando dzakasiyana dzetambo dzinoumbwa nezvinhu zvakasiyana uye zvinoshandiswa zvakasiyana zvinoshandiswa. Zvimwe zvikumbiro zvinokumbira humbowo hwemvura, yakakwira michini simba, UV kusagadzikana uye isu tinosimbisa zvimwe zvinhu (Simbi waya, RFP, aramid yarn, jelly, PVC chubhu nezvimwewo) mune tambo yekuvandudza mashandiro ayo.
Jera akabudirira akabatanidza fiber optic tambo mhinduro yeGPON, FTTx, FTTH network kuvaka. Yedu optic tambo inokwanisa kuiswa pane yepakati chiuno kana yekupedzisira mamaira nzira yezvivakwa zveindasitiri, njanji uye nzira yekufambisa, zvivakwa zveindasitiri, nzvimbo dzemasikati uye ect.
Tambo yedu yakaverengerwa murabhoritari yefekitori kana yechitatu bato rabhoritari, kuongorora kana bvunzo kusanganisira kuisa kurasikirwa uye kudzoka kurasikirwa bvunzo, tensile simba bvunzo, tembiricha uye Humidity Kutyaira Bvunzo, UV kuchembera bvunzo uye nezvimwe izvo zvinoenderana nematanho eIEC-60794, RoHS uye CE.
Jera inopa zvese zvine chekuita nepassive optic network yekuparadzira zvishongedzo senge: fiber optic tambo kambo, fiber optic pacth tambo, fiber optic splice kuvhara, fiber optic kugumisa bhokisi uye nezvimwe.
Ndapota inzwa wakasununguka kutisangana nesu kuti uwane ruzivo rwemangwana!
Fiber optic tambo ine Frp Rods, 4 Fibers
Ftth fiber optic tambo ine Frp Tsvimbo, 2 Fibers
Kudonhedza Cable neFrp Rods, 1 Fiber
Flat Kudonha Cable neSimbi Tsvimbo, 4 Fibers
Fiber Optic Donha Cable ine Simbi Matanda, 2 Fibhi
Kudonhedza Cable ine Simbi matanda, 1 Fiber
Ftth internet optic waya pamwe FRP waya uye FRP Ro ...
Ftth Drop Cable ine Frp Waya uye FRP Tsvimbo, 1 F ...
Ftth Kudonhedza Cable Simbi Waya Uye Matanda akasimbiswa, ...
Ftth internet optic waya, simbi waya uye tsvimbo Rei ...
Ftth faibha optic waya Simbi Waya Uye Matanda Rein ...
Ftth Cable Simbi Waya uye Frp Matanda Akasimbiswa, ...